श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित ! – Khabaarpati
October 14, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित !
धनाढ्य घरकी एक महिलाले आफ्ना श्रीमानबाट छुटकारा पाउनको सबैलाई चकित पार्ने का ण्ड घ टाएकी छन् । उनले यस्तो का ण्ड गरिन् कि वास्तविकता खुल्दा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी नै दंग परे ।
भारतीय मिडिया आज तकको समाचारअनुसार राजधानी दिल्लीकी यी महिलाले आफ्नै आ त्म ह त्याको झु’टो कहानी रचेकी थिइन्, जसको खुलासा गत मंगलबार भएको थियो ।यी महिलाले उत्तर प्रदेशको गाजियाबादस्थित हिडन ब्यारेज नजिकै लगेर आफ्नो कार राखिन्,कारमा सु’सा’ इड नोट राखेर फरार भइन् ।
पछि उनी बैंगलोरमा भेटिइन् । आ त्म ह त्या को झुटो कहानी रच्ने कोमल तालान नामकी यी महिलाले गाजियाबादको नहरको पुलमा आफ्नो गाडी राखिन् । त्यसपछि उनले नहरमा हाम्फा लेर आ त्म ह त्या गरेको खबर फैलियो । ३ दिनदेखि गोताखोरले नहरमा ला श खोजिरहेका थिए तर ला श भेटिएको थिएन ।
कोमलले कारमा सु’सा’ इट नोट पनि छाडेकी थिइन् जसमा उनले आफूले आ त्म ह त्या गर्न लागेको लेखेकी थिइन् । कोमलले यो सब गर्नुको पछाडि उनी श्रीमानदेखि हैरान भएको पाइएको छ । उनले आ त्म ह त्या को झु’टो कहानी रचेर श्रीमानलाई कानूनी रुपमा फ’सा’उँन चाहेकी थिइन् ।
शनिबार बिहान ११ बजे पुलिसले पुलबाट बेवारिसे अवस्थामा स्कार्पियो कार बरामद गरेको थियो । स्कार्पियोमा सु’सा इड नोट थियो, जसमा कोमल तालानको नाम उल्लेख थियो । उनका पिता अनिल तालान भारतीय किसान युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्। उनीहरुको परिवार ग्रेटर नोएडामा बस्छन् ।
अनिल तालानले पनि छोरीलाई परिवारमा त’नाव दिइएको आ’रोप लगाएका थिए । तर, कोमल भागेर बैंगलोर पुगेको अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई दिल्ली ल्याएर का’रवाही अगाडि बढाइएको छ
कोरोनाले दु:ख डिरहेका बेला जापानमा गयो ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
May 2, 2021 goodmam
१३ वर्षका किशोरले गरे ‘दृश्यम’ फिल्म हेरेर ह’ त्या, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा अचम्मित पारिदिने बयान